Akụkọ na mgbanwe Kubuntu 12.04 nwere ike inwe | Site na Linux
Akụkọ na mgbanwe Kubuntu 12.04 nwere
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, Nkesa, GNU / Linux
Nwa oge gara aga enweghi ozi ma obu mmelite Kubuntu, lee mgbanwe ndị a Kubuntu 12.04 (Pangolin ziri ezi) anyị nwere ike ịchọta:
Ọhụrụ mbipute nke KDE. Ọ bụ ezie na otu ndị Ubuntu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Akụkọ na mgbanwe Kubuntu 12.04 nwere
Ihe 34 kwuru
Kdị KDE kachasị ọhụrụ ga-adị. Ọ bụ ezie na ndị otu Ubuntu nwere ike ọ gaghị agụnye ụdị nke Gnome kachasị ọhụrụ, ụmụ okorobịa (na gals haha) na Kubuntu chere na ọ dịghị nnukwu ihe egwu dị na gụnyere KDE na ụdị ya kachasị ọhụrụ.
Kedu ihe ị na-ekwu maka mijito? Ọ bụrụ na Gnome Shell nọ na Ubuntu na ụdị ọhụụ ya ka ọ bụghị?
Onwe ya (ma ọ bụghị n'ihi na m bụ onye ọrụ KDE) enwere m mmetụta ka mma banyere ọrụ nke ndị ọrụ mmepe Kubuntu karịa nke Ubuntu. Amaghim ... echere m na ha nwere ike itinye echiche nke ndi obodo karia, amaghi m ... enwere ike m mehiere
Ee ee, ị mehiere, ụmụ okorobịa Ubuntu ahụtụbeghị ihe gbasara Kubuntu mbụ.
Bịa, bụrụ ezigbo onye na-agụ ma gụọ aha isiokwu ahụ ọzọ 😉
Enwere okwu B NOTGH of nke 11.10 dị ugbu a, mana nke na-esote 12.04, na dịka nke a ga-abụ LTS, yabụ enwere obi abụọ banyere ma ọ ga-etinye ụdị ọhụrụ nke Gnome3 nke a na-agaghị anwale nke ọma.
Echeghị m na nke ahụ bụ ikpe ahụ, ya bụ, ndị otu mmepe Ubuntu dị iche na Kubuntu (ma ọ dịkarịa ala m ghọtara ugbu a), ọ bụ eziokwu na Kubuntu enwetụbeghị nhọrọ kachasị mma maka distros na KDE, mana nke nta nke nta ha nwere njirimara nke ha, mgbanwe / akụkọ ha tinyere nke ga-eme ka Kubuntu mara mma karịa (dịka ọmụmaatụ) openSUSE ma ọ bụ Fedora.
Iji maa atụ, Muon bụ ezigbo ọrụ, dịka echiche ịhapụ Kopete na iji Telepathy ga-adọta ọtụtụ ndị ọrụ sitere na heros heros ndị ọzọ.
Dịka onye ọrụ Linux Arch, ị kwesịrị ịma na ngwa nke distro na-eweta na ndabara anaghị eme ya "kachasị mma" ma ọ bụ nke kacha njọ nke disros. Come bịara na ngwa 2 ahụ ga - eme Kubuntu onye "kachasị" n'elu distros na ọ bụrụ na ha na-emeso kde dị ka o kwesịrị (onye ọ bụla maara na abụghị m onye kde hụrụ n'anya, mana ihe "Amaara m" banyere ya)
Ebee ka m kwuru otu ma ọ bụ abụọ ngwa ga-eme ka Kubuntu kacha mma?
Ihe m chere bụ na ha nwere ike ime ka ọ bụrụ nhọrọ ka mma maka ndị novice, ndị ọrụ na-enweghị uche chọrọ ịnwale KDE.
«Mgbanwe / atụmatụ ọhụrụ ha na-etinye nke ga-eme ka Kubuntu mara mma karịa (dịka ọmụmaatụ) openSUSE ma ọ bụ Fedora.
Dịka ọmụmaatụ, Muon bụ ezigbo ọrụ, ebe echiche ịhapụ Kopete na iji Telepathy ga-adọta ọtụtụ ndị ọrụ sitere na heros heros ndị ọzọ.
Should kwesịrị ịkọwa onwe gị nke ọma site na mbido
"Ihe m chere bụ na ha nwere ike ime ka ọ bụrụ nhọrọ ka mma maka novice, ndị ọrụ na-enweghị uche chọrọ ịnwale KDE."
Ọ dị nnọọ iche na-adọta ndị ọrụ site na distros ndị ọzọ site na ngwa 2 pts iji dọta ndị ọrụ novice na ndị ọrụ na-enweghị uche.
N'otu aka ahụ, echere m na ọtụtụ ndị ọrụ (Fedora, openSUSE, dịka ọmụmaatụ) nwere ike inye nke a ma ọ bụ ụdị ọzọ nke Kubuntu, ma ọ bụrụ na ha masịrị ya, ha nwere ike idebe ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụrụ na ha enweghị mmasị na ya, ha laghachi na distro ha gara aga, ihe niile gbasara onye ọrụ na ihe ọ bụla ị chọrọ.
Eeh, ekwesịrị igosipụta ihe niile site na mbido ka m wee ghara ịgbagha gị.
HAHAHA bịanụ, naanị ị hụrụ ohere ịzọtụ ntakịrị ma ebe ahụ i jiri ya mee ihe, yana ebe ọ bụ na ike gwụrụ m mgbe ahụ agbasoro m obere egwuregwu ahụ, ọ dịghị ihe ọzọ HAHAHAHA
Mgbe ahụ ha na-eme mkpesa na m na-eme mkpesa banyere <° Ubuntu
Ha, ihe nwa nwanne nne nwanne nwanne nwanne nne nwanyị agbata obi m gwara m na ha ga-eweta ihe ọma xx.xx igbo onwe ya agụụ.
Aga m ajụ gị naanị otu ajụjụ:
Ogologo oge gara aga ka anyị etinyeghị * buntu ọ bụla
Ma ọ bụ ịkpa ókè ọ bụla distro.
- Ikwesiri inwe IBM Roadrunner ka ọ bụrụ obere mmiri
- Nnukwu nsogbu
- Ọ ga-agụnye ịmị ọkụ nke enyerela Tito Mark na aghụghọ site na iji okwu anwansi ya
- Ahụmahụ na KDE na Kwinbuntu ga-adị ka ọ dị na mbụ, ya bụ, jọgburu onwe ya
- A ga - eme mbipụta ndị ọzọ karịa akụkụ Mac O $ X
Kubuntu m na-ahụghị na ọ depụtaghachiri nke ukwuu na Mac, bọtịnụ aka ekpe na n'ihi na ọ bụ "mkpebi" e mere na isi distro (Ubuntu)
Agbalịrị m Beta2 nke Kubuntu 11.10, eziokwu bụ ntakịrị nke enweghi nsogbu ee, mana ọ bụghị ihe ọjọọ 😀
O doro anya na m na Arch hehe m na-anọ
Ọ bụ iberibe ihe ọ bụla ọzọ, mana nkwụsi ike nke distro a bụ ihe na-atọ ọchị
Echere m na mmetụta "disabling" na iwepu ụfọdụ ngwa iji belata oriri dị ka a ga - asị na ị nwere "babe" nke 17 ha gbanwere ya maka 40, kọwaara m otu ị ga - adị, hahaha.
Ọfọn, dịka ha na-ekwu na 40 dị ọkụ karị ... you na-ekwu na na mgbanwe ndị a kọmputa ga-ekpo oke ọkụ? 😉
HAHAHAHAJAJAJA ezigbo ajuju HAHAHAHA.
Mmadụ Bịa ka saịtị 😀
Ihe niile dị na uto onye ọ bụla, enwere ndị na-amasị ụmụ afọ iri na asaa ka mma.
Site na ndabara, m na-ahụ nke ọma na ọ na-abịa na obere mmetụta, nke a na-ekwe nkwa na mbipụta 1 nke sistemụ ahụ dị mmiri mmiri, yabụ ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ka mmetụta ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ọ bụ ya.
Echere m, kedu ka ọ dị ka nwatakịrị nwanyị dị afọ 35 mana ọ nwere obere ọrụ ọ nwere ike inwe ahụ na ihu nke HAHAHAHA dị afọ iri na asaa
Cheta na mgbe ịmalite ịwa ahụ ịchọ mma, ị ga-amịpụ ya ọtụtụ oge, ma ọ bụ? ha ha ha ha ha ha.
Zas n'ọnụ dum HAHAHAHAHA
A ka nwere ọtụtụ ndị dị afọ iri na asaa na-enwe mwute (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe m masịrị m)
Wantchọrọ ịwụnye Telepathy, ajụjụ m bụ nke Gnome ka ọ bụ Kde? nke ikpeazụ nwere ike ịbụ naanị maka Kde 4.8.
Na KDE doro anya hehe, m na-eji KDE 4.7.3, na m na-anwụ ịnwa ịnwa onye ahịa IM a 🙁
Ihe nkuzi obula ma obu ntuziaka ma obu ihe puru inyere m aka itinye ya? ... ọ baghị uru na m ga-achịkọta (ejiri m ya, HAHAHA)
I lebara anya na aur?
emmm, hehe ... nope m enyochala - ^ U
A ka nwere ọtụtụ nchịkọta ndị dịkwa na ụlọ nkwụsi ike / gọọmentị.
M wụnyere ha ụbọchị ole na ole gara aga, mana ọ nweghị ... efu Telepathy nhọrọ ebe ọ bụla, ọ bụ ya mere m ji chọọ nkuzi ma ọ bụ ihe ga-eduzi m hehe.
Lee Telepathy Kde ọ siri ike na ọ dị tupu Kde 4.8 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka m zitere gị nkuzi nke otu arụnyere na Arch na Gnome.
Nah na Gnome abughi m ihe kwesiri ya, aga m acho ya ka o buru Qt ka m masia ya hehe.
Ma ọ bụghị versionitis ihe m nwere (Enwere m ya, mana ọ bụghị na nke a HAHA) ... Ọ ga-amasị m ịnwale ihe dị iche na Kopete 😀
Grub2 ... damn echetakwa ya HAHA, achọghị m ịkwalite site na Grub1 gaa Grub2 n'ihi mbipụta ọ bụla, mana ọ bụ ime Nkechi Ọ ga-arụ ọrụ ka mma, n'ikpeazụ abughi otu ma ọ bụ nke ọzọ HAHAHA
Echefuru m na ụdịdị gị ga-akwụsị gị, kama iji Arch gị, echefula banyere grub2, hahahahaha.
Hey enyi, ma ọ bụrụ na i nwere ike ịhapụ ahịrị nke onye ọrụ gị gị n'ụlọnga, nke nwere ike ịbụ ozi ọzọ agụ 🙂
Nke a bụ nke m nwere:
General.useragent.override; Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64; rv: 7.0.1) Gecko / 20100101 Debian Iceweasel / 7.0.1
Enwere m olileanya na ọ bara uru nye onye ọrụ ọzọ, onye nhazi m bụ AMD64, ọ bụ ya mere ọ bụ x86_64.
Mgbe m na-akwaga Kubuntu 10.04 m na-eme ka ọtụtụ ihe dị mfe, m ghọtara ihe onye edemede ahụ kwuru na kubuntu 10.04 ka 10.11 yiri nke ọma, mana nke ikpeazụ nwere arụmọrụ ka mma, ọ nwere ike ịbụ ntọala ọhụrụ na ụdị ọhụụ nke akụrụngwa ahụ, ọbụlagodi na ọ ga-abụ akụkụ nke Onye ọrụ iji rụchaa ya ga-edozi, gbanye ya ma wepu ahụhụ ọ bụla na-adọkpụ site na nsụgharị ndị gara aga. Amụtala m ọtụtụ site na web dị ka nke a na nzukọ dịka Kubuntu-es na EsDebian, enwere m ike ịsị na-ekele gị nke ukwuu.
Ọfọn, Kubuntu 12.4 dị ka ezigbo mkpuru n'anya m, ọ bụrụ na ịnwale ya
hey mere m ji nweta akara ngosi ubuntu; Anọ m na kubutu¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Gwa m ma akara Kubuntu ma ọ bụ Ubuntu pụtara na sidebar (na aka nri aka nri).
M kwenyere kpam kpam na lolopolloza, ma ọ bụ 12.04 bụ kpam kpam mkpuru.
Kwesịrị Linux Mint dabere na Debian ma hapụ Ubuntu?
Mara Xfce na omimi site na enyemaka gị